बोक्सी आरोपमा प्रताडना : जनप्रतिनिधि नै मतियार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
२०७४ देखि २०७७ असारसम्म बोक्सी आरोप लगाउने र मतियार बन्ने ३५ जनप्रतिनिधिविरूद्ध उजुरी परे पनि ‘प्रमाण अभाव’ मा अधिकांश रिहा
जस्तोसुकै व्यवस्था आए पनि नेताहरु परम्परावादी सोचबाट निर्देशित छन्, महिलाको सम्मान र अधिकारका लागि उनीहरुसँगै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । -राधा पौडेल, अधिकारकर्मी
पुस १३, २०७८ अमृता अनमोल
बुटवल — रूपन्देहीको सम्मरीमाई–७ बेतकुइयाँकी जगमती पासी तरकारी केलाउँदै थिइन् । त्यहीबेला हूलै बाँधेर आएको छिमेकी रामजनम यादवको परिवारले उनलाई बोक्सी भन्दै तथानाम गाली गर्न थाल्यो ।जगमतीकै कारण रामजनमका दुईवर्षे छोराले खाना खान छोडेको, बान्ता गरेको र बेलाबेला तर्सिएको भन्दै उनीहरूले टुनामुना फर्काउन धम्की दिए ।
‘गाउँमा टुनामुना, डायन, बोक्सी लाग्यो भन्ने, झैझगडा गर्ने सानातिना घटना भइरहन्छन्,’ उपाध्यक्ष सिंह भन्छिन्, ‘उजुरी लिएर घर आउनेलाई श्रीमान् र बुवा (ससुरा) ले सम्झाउनुहुन्छ, गाउँपालिकामा मैले ।’ उपाध्यक्षले पीडित जगमतीलाई मात्रै ‘सम्झाएर’ पठाएपछि छिमेकीले उनीमाथि हिंसा गर्न छोडेका छैनन् । ‘अझै पनि टोलमा कोही बिरामी पर्‍यो भने डाक्टरकहाँ लैजानु सट्टा मलाई गाली गर्न आइपुग्छन्,’ जगमती भन्छिन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको आचारसंहिता २०७४ मा पदाधिकारीले लैंगिक हिंसा, छुवाछूतजस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न/गराउन लागिपर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, ऐन र आचारसंहिताअनुसार बोक्सीको नाममा भइरहेका यातना र दुर्व्यवहार निर्मूल पार्ने प्रयास थाल्नु त परको कुरा पीडितलाई न्याय दिलाउनसमेत जनप्रतिनिधि सहयोगी नबनेका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
यसको उदाहरण हुन्, झापाको मेचीनगर–९ का वडाध्यक्ष गोपाल खड्का । खड्काले बोक्सी आरोपमा दुर्व्यवहारमा परेकी वृद्धालाई वडाध्यक्ष (आफैं) लाई सम्बोधन गरी निवेदन लेख्न लगाएर न्यायिक प्रक्रियामा जानबाट रोकिदिए । ७ जेठ २०७७ मा मेचीनगर–९ की ८१ वर्षीया गंगामाया बस्नेतलाई छिमेकीले बोक्सीको आरोप लगाएर दुर्व्यवहार गरेका थिए । त्यसपछि पीडक कुमारी चम्लागाईं र झारफुक गर्ने ‘माता’ सावित्री शिवाकोटीविरुद्ध उजुरी लिएर गंगामाया वडाध्यक्ष खड्काकहाँ पुगिन् । खड्काले न्याय दिलाउँछु त भने तर निवेदनमा आफूलाई सम्बोधन गर्न लगाई मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा लगेनन् । वडाको समस्या वडामै मिलाउने भन्दै उनले पीडकले पीडितको खुट्टा ढोगेर माफी माग्नुपर्ने र पीडितले माफी दिनुपर्ने निर्णय सुनाए ।
समाजमा अति कमजोर अवस्थामा रहेका एकल, गरिब, रोगी महिलाले बोक्सीको आरोपसँगै दुर्व्यवहार र हिंसा खेप्नुपर्छ । बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२ मा बोक्सी आरोपमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले कसुर गरेमा २५ प्रतिशत बढी सजाय हुने व्यवस्था समेत ऐनमा छ । तर, नागरिकको ढोका अगाडिका जनप्रतिनिधि नै बोक्सी प्रथाको वकालतमा लाग्दा महिलाहरू पीडित हुने क्रम रोकिएको छैन ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्ष (आव २०७७/७८ सम्म) देशभर २१० वटा बोक्सी आरोपका उजुरी दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म चार महिनामा मात्रै यस्ता २३ उजुरी दर्ता भए । यस अवधिमा प्रदेश २ मा ९१ वटा बोक्सी आरोपका उजुरी प्रहरीमा पुगेका छन् । बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि सबैभन्दा बढी प्रताडना क्रमशः प्रदेश २, प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशमा छ ।
निवृत्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवं अधिवक्ता राजकुमार वैदवार बोक्सी जस्ता कुप्रथाविरुद्ध राजनीतिक बहस कहिल्यै नहुँदा केही जनप्रतिनिधि यस्तै प्रथाको पृष्ठपोषणमा लागेको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूले पूर्वाधार विकासका एजेन्डा बनाएजस्तै सामाजिक कुसंस्कार र कुप्रथा हटाउनेबारे पनि एजेन्डा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । समाजशास्त्रका जानकार डा. नारायण पन्थ गरिबी र अशिक्षाले व्याप्त समाजमा ‘कमजोर’ लाई बोक्सीका नाममा हेप्ने र दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । ‘बोक्सी प्रथा अन्त्य गर्न वर्गीय विभेद हटाउनुपर्छ र सबैमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच पुग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
मनोचिकित्सक डा. सन्दीप रेग्मी भने बोक्सी मनोवैज्ञानिक समस्या भएकाले त्यसअनुसारको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘धामीझाँक्री काम्नु, बिरामी बर्बराउनु वा कसैलाई बोक्सी भन्नु मनोवैज्ञानिक समस्या हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसबारेमा सबैभन्दा पहिले दलका नेता र सामाजिक अगुवालाई बुझाउने र बिरामीलाई अस्पताल लैजाने वातावरण बनाउने हो भने बोक्सी समस्या रहने छैन ।’
प्रकाशित : पुस १३, २०७८ १०:५४
सुर्खेत–दैलेख सडकखण्डमा पुन: सवारी सञ्चालन हुँदै
पुस १३, २०७८ चाँदनी कठायत
वीरेन्द्रनगर — गत मंसिर १५ गतेदेखि बन्द रहेको सुर्खेत–दैलेख सडकखण्डमा आज (मंगलबार) देखि गाडी सञ्चालन हुने भएका छन् । सडकअन्तर्गत पर्ने दैलेखको गाईबान्नास्थित सडक फराकिलो बनाउनलाई चट्टान काट्नुपर्ने भन्दै बन्द गरिएको सडकमा नै वैकल्पिक सडकको प्रयोग गरी गाडी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ ।
सडक स्तरोन्नतीको काम भइरहेकाले मंसिर दोस्रो सातादेखि सुर्खेत–दैलेख सडकखण्डमा ठूला गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । यो रुटमा अब भने यात्रुबाहक सवारीसाधन गुड्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । आजदेखि यात्रुबाहक साना गाडी चल्ने भएका हुन् । हाइस, फोर्सलगायतका गाडीलाई दुईतर्फी चल्न दिइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ ।
बन्दै गरेको सडक पुस मसान्तसम्म अवरुद्ध हुने जनाइएको छ । यसअघि मंसिर १५ देखि पुस १५ गतेसम्म सडक स्तरोन्नती गरिसक्ने भनिए पनि हालसम्म जम्मा आधा काम मात्र सम्पन्न भएको छ । जसले गर्दा सडक मर्मतको काम केही दिन अझै लम्बिने देखिएको हो । त्यतिबेलासम्मका लागि साना सवारी बाइपास रुटबाट र ठूला सवारीका साधन कर्णाली राजमार्गको रूट हुँदै चल्ने छन् ।
यात्रुको सहजताका लागि बाइपास रोडलाई ग्राबेल गरेर हाइस तथा फोर्स गाडी दुवैतिर चल्न सक्ने बनाइएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मालबाहक ट्रक र ठूला बस भने कर्णाली राजमार्गको सियाकोट, तल्लो डुंगेश्वरदेखि बाागेसिमलको रूट हुँदै गुड्ने छन् । सबै सवारी साधन यही रूटमा चल्दा दूरी लामो पर्ने र भाडासमेत महँगो भएको गुनासो आएपछि साना सवारी साधन मर्मत हुँदै गरेको सडकखण्डबाटै सञ्चालन गर्ने विकल्प निकालिएको हो । प्रशासन कार्यालयले सडक डिभिजन सुर्खेतसँग समन्वय गरेर वैकल्पिक बाटो निकालिएको प्रजिअ प्याकुरेलले बताए ।
गुराँस गाउँपालिकाको गाईबान्नास्थित घाम ताप्ने भिरमा चट्टान काटेर सडक फराकिलो बनाउन लागिएको छ । भीरको चट्टान काट्ने काम ५० प्रतिशत सकिएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । उक्त भीरमा साँघुरो बाटो भएकाले फराकिलो गर्न चट्टान काट्न लागिएको हो । अहिले तीन मिटर मात्रै सडक चौडा रहेको यो भीरमा १५ मिटर उचाइको भीर कटान गरेर सात मिटर चौडा सडक बनाइने छ ।
प्रकाशित : पुस १३, २०७८ १०:१५